I-salon Cosmetological, inikezela ngobuningi bezimpawu zobuso. Uma ungenaso sonke isikhathi sokuvakashela ukwelashwa kwezobuhle be-beauty salons, ungasebenzisa izincomo ezithile eziwusizo zokupaka ama-masks nokuqhuba ama-mask sessions. Amasks ebusweni, alungiswe ekhaya, ngokuvamile ezindaweni zabo eziwusizo kakhulu adlulisa ama-masks okukhiqizwa kwezimboni. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa ezidakayo ukuze unike ubuso bakho ubuhle nokukhanya, sebenzisa zokupheka ekhaya ngamaski. Mhlawumbe imiphumela yabo iyoba ngaphezu kwakho konke okulindelweyo.
Ngakho-ke, masiqale ngeqiniso lokuthi izici zobuso ebusweni bekhaya zikhulisa ukujikeleza kwegazi, zithinta izinga eliphakeme lokukhishwa kwesikhumba ngezinto eziphilayo ezisebenzayo nezondlo.
I-mask ebusweni bomzimba ihlelwe kuphela emikhiqizweni emisha futhi ingagcinwa isikhathi eside, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa imaski elungiselelwe ngokushesha ebusweni, entanyeni nasendaweni ye-décolleté. Ngendlela, entanyeni. Ungakhohlwa ngale ndawo ebaluleke kakhulu emzimbeni wesifazane. Isikhumba sentamo nesifunda se-decolleté somile kakhulu kunesikhumba sobuso, ngoba cishe azikho izinhlayiya zokuzibulala. Ukuqhubeka kulokhu, intamo idinga ukondla okunamandla okunamandla nokuphuthumayo. ngakho-ke umthamo we-mask owenziwe ubalwa kangangokuba akwanele futhi awukho intamo.
Uhlobo oluthandwa kakhulu lwe-mask, ikakhulu ehlobo, luyi-berry-yemifino, olufaka utamatisi, isithombo, ama-strawberries namafutha we-sunflower. Indlela yokulungiselela imaski ihlanganisa ukuxuba izingxenye ezikhulunywe ngaphambili, enezela amaconsi amathathu amafutha e-sunflower. Ngaphambi kokuqala kwenkambiso, isikhumba sobuso kufanele silungiselelwe ngaphambi kokulungiswa ngokugcoba nge-lanolin ukhilimu noma nanoma iyiphi enye ikhilimu yokunyusa.
Faka emasikini ebuso, kuyadingeka ukususa emva kwemizuzu engu-15 bese ugeza ubuso bakho ngamanzi afudumele. Ubuso bakho buyokhanya futhi bube buhle, futhi isikhumba siphendule futhi siveze.
Ukusebenza kahle ngokuvuvukala noma ukukhishwa kwesikhumba kufezwa ngokusebenzisa imaski yamazambane. Ukwenza imaski, udinga ukubheka amazambane abomvu bese uwaxuba ngofulawa - 1 / 1. I-"cocktail" elungiselelwe isetshenziswe ebusweni ngobuningi obuningi obuningi, obuphezulu obuhlanganiswe ne-napkin juice napkin. I-mask ingahlanzwa ngobisi ehlanjululwe ngamanzi. Futhi le mask elandelayo iyasiza kakhulu, isetshenziselwa ikakhulu isikhumba esikhulile, ngoba umphumela wayo uvuselela futhi uqinisa. Gwema amazambane nge grater enkulu ubisi kuze obukhulu. I-Kashitsu igqoke ubuso bese ushiya imizuzu engu-20, bese ugeza ngamanzi afudumele.
Okuthandwa kakhulu yi-mask ekususeni induna. I-mask isebenzisa i-parsley ne-cottage shizi. Ilungiselelwa ngokuxuba i-parsley echotshoziwe kanye nezipuni ezimbili ze-cottage shizi. Isikhathi sokusetshenziswa kwe-mask sinqunyelwe emaminithini angu-10-12, emva kwalokho isiski kufanele sihlanzwe ngamanzi afudumele. Umphumela oqabulayo we-mask ufinyelela kunoma yiluphi uhlobo lesikhumba. I-mask enjalo kufanele yenziwe njalo kanye ngesonto ukuze kufezwe umphumela omkhulu.
Endabeni yama-pink acne, impande ephahliwe ka-parsley ixutshwe ngokulinganisela okulinganayo ne-white egg. Le maski ishiywe ebusweni imizuzu engu-20. Ngemuva kwemizuzu engu-20, i-mask ingasuswa.
Isiqu esheshayo sokuphila senza uchithe ubuningi obukhulu. Umzimba wethu uhamba phambili, ukukhathala kubonakala kakhulu ebusweni. Ngakho-ke, ukuthandwa okukhulu manje kusebentisa imaski ethuthukisa ubumba, yikhanyise. Nansi enye yamaski anjalo okuyisimangaliso.
Ukuze unciphise ukucindezeleka nokuhlanza isikhumba sobuso, kungenzeka ukuba ulungiselele imaski kusuka kumhlophe abamhlophe abaxubene no-1 tsp ukhilimu wesikhumba esomile kanye no-1 tsp wejusi yemvelo. Phuma, uhlale kahle embhedeni bese usebenzisa isisindo esilungisiwe ebusweni bakho. Ukususa ukuphazamiseka emehlweni kuzosiza ukotini swabs, obombele itiye ukuphuza. Ngemuva kwemizuzu engama-20 ngaphambi kokufaka isicelo somswakama, geza imaski ngobisi olufudumele.
Izakhiwo eziyingqayizivele ye-tonic ne-vitaminzing zine-mask strawberry - eziqabulayo, ezinika ukuvama kwesikhumba nobubele. Ijusi, elungiselelwe kusuka ku-strawberries fresh, lisetshenziswe ngokulinganayo ebusweni imizuzu engu-15-20. Ngemuva kokukhipha imaski nokugcoba ubuso ngamanzi afudumele, ukhilimu onomsoco uyasetshenziswa. Ukhilimu nawo usetshenziselwa ukulungiselela ukusetshenziswa kwe-mask esikhumbeni esomile.
Isikhumba esomile sizonikeza ukuthobeka nokuzwela isiski esilandelayo esinomsoco. Iqukethe amafutha omnqumo namafutha emifino. Hlanganisa ingxube ebusweni nasentanyeni imizuzu engama-20, bese ugeza isikhumba ngamanzi afudumele. Lo mask uvame ukwenza nsuku zonke.
Ngalolu hlobo lesikhumba, i-mask of juice okusajingijolo iyasebenza kakhulu. Ukulungele kusuka kwesigamu ingilazi yejusijoloji, kufanele uhlanza izinhlayiya ezincane, engeza izipuni ezimbili zobisi bese uxuba kahle. Ucezu lwe-gauze, oluswakanyiswe engxenyeni elungiselelwe, lusetshenziswa esikhumbeni imizuzu engu-15, ngemva kwalokho kufanele isuswe futhi ihlanjwe ubuso ngamanzi apholile. Umphumela oqabulayo wesikhumba esomile uqinisekisiwe.
Yiba mnandi futhi wemvelo!
Masks for face, ekhaya
Ukushaya - isenzo se-makeup esisha-2016
Ikhishi elingaphakathi isitayela se-Provence
Isaladi ngekhukhu elibhemayo nama-peas aluhlaza
Amazambane casserole "Gauranga"
Inkukhu ene-salmon i-salsa ne-pea puree
Amafutha, isakhiwo nesicelo
Ukuba wesifazane kulula: iqoqo elisha lehlobo-ehlobo e-Bizzarro
Zucchini othosiwe ukhilimu omuncu
UFerret: ukugcinwa kwezindlu